पाँच नम्बर प्रदेशकाे राजधानी बुटबल बन्न सक्ला ?
प्रकाशित मिति : ८ पुष २०७४, शनिबार ०९:४०
विकाश पराजुली/बुटवल। प्रदेश नं. ५ को राजधानी बुटवल या दाङ, यो विषय अहिले बजारका चिया पसल देखि चोक चोकमा बहस हुन थालेको छ ।
प्रदेशको राजधानी दाङ नभए आठौ प्रदेशको जन्म हुन्छ भनेर माओवादी नेता कृष्ण बहादुर महराले र एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलले समेत दाङनै प्रदेश ५ को राजधानी बन्छ भनेर दाङबाट भनिरहँदा बुटवलबाट एमाले नेता विष्णु पौडेल प्रदेशको राजधानी बुटवल नभए अखण्ड लुम्बिनी जस्तै आन्दोलन चर्काउँछौ भन्दै भाषण गरिरहेका छन ।
यसरी प्रभावशाली नेताहरु नै आ–आफ्नो क्षेत्रलाई राजधानी बनाउनु पर्छ भनी लागेका कारण पनि पाँच नम्बर प्रदेशको राजधानी सजिलै तोकिन्छ भन्न सक्ने स्थिति छैन । स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेश र प्रतिनिधी सभा निर्वाचनको समयमा बुटवलमा रानीतिक दलले प्रदेश राजधानीको मुद्धालाई चुनावी एजेण्डा बनाएर निर्वाचनमा होमिए ।
निर्वाचन सफल भएपछि विज्ञको टोली बुटवलमा राजधानीका लागि आवश्यक पुर्वाधार हेर्न पनि आयो । बुटबल आएको विज्ञ टोलीले प्रदेशको राजधानी बुटवल उपयुक्त छ भनेको छ । उता दाङमा पुर्वाधार हेर्न गएको टालीले दाङलाई समेत उपयुक्त भनेपछि विवाद झन् चुलिने देखिएको छ ।
यता बुटबलले प्रदेशको राजधानी हुने प्रसस्त आधारहरु पेश गरेको छ । बुटवलमा अखण्ड लुम्बिनीको आन्दोलन चलिरहँदा दाङ मुखदशक भएको भन्दै बुटबलवासीले दाङको आलोचना गरेका छन् । अर्को तर्फ प्रदेश प्रमुख दाङले प्रदेश प्रमुख पाउँदा बुटबलले राजधानी पाउनु पर्ने दावी बुटबलको छ ।
बुटवल राजधानी बन्न सक्ने आधारहरु
नेपाली राजनीतिमा उच्च प्रभाव जमाउन सक्ने राजनीतिज्ञ रुपन्देही जिल्लामा छन । त्यस संगै छिमेकी जिल्ला, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी लगाएका जिल्लाबाट पनि बुटवललाई प्रदेशको राजधानी आवाज उठाउन सक्ने बहुमत राजनीतिक दलहरुसँग छ ।
रूपन्देहीको बुटवल राजधानी बनाउन पर्छ भनेर माग गर्ने एमाले नेताहरू विष्णु पौडेल, धनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, प्रदीप ज्ञवाली, नेपाली काङ्ग्रेसका बालकृष्ण खाँण, दीपकुमार उपाध्याय, चन्द्र भण्डारी, यस्तै माओवादीका टोपबहादुर रायमाझी जस्ता नेताहरूको केन्द्रमा राम्रो पकड छ । त्यसैले पनि उनीहरुको प्रभावमा बुटबल राजधानी बन्न सक्नेमा बुटबलवासी आशावादी छन ।
पहाडी जिल्लालाई सुगमता
भौगोलिक अवस्था र सामाजिक कारणले बुटवलसँग लुम्बिनी अञ्चलबासीको निकटको सम्बन्ध छ । बुटवल बस्नेमध्ये धेरैको गुल्मी, आर्घाखाची, पाल्पामा दोहोरो बसाइ छ । उनीहरूको चाहना बुटवल राजधानी बनाउनुपर्ने छ । त्यस बाहेक बुटबल पूर्व पश्चिम राजमार्ग पर्ने भएकोले पनि अन्यत्रसँगको सम्पर्ककालागि बुटबल उपयुक्त हुने बुटबललाई राजधानी बनाउन माग गर्नेहरुको दवी छ ।
बुटवल पुरानो व्यापारिक स्थान पनि हो । अहिलेकै अवस्थामा पनि प्रदेश नं. ५ का अधिकांस जिल्लाहरुमा बुटवलबाटै मालसामान ढुवानी हुँदै आएको छ ।
सह क्षेत्रिय प्रसासन कार्यालय पोखराका निमित्त प्रमुख बावुराम गौतम सहितको विज्ञ टोलीले बुटवलका विभिन्न स्थानमा पुगि आवश्यक पुर्वधार भए नभएको बारे खोजी गर्यो । प्रदेश प्रमुखको सचिवालय ईलाका प्रशासनको कार्यालयमा र मुख्य मन्त्रीको कार्यालय राजश्व अनुसन्धान बुटवलमा राख्न सकिने टोलीको आँकलन छ ।
त्यसैगरी सिप विकास केन्द्र रामनगर, यातायात व्यवस्था कार्यालय, नोपतौल कार्यालय, ईलाका प्रशासन कार्यालय, बुटवल उद्योग बाणिज्य संघको सभा हल, श्रम कार्यालयको नवनिर्मित भवन, व्यापार संघको सभा हल, कान्ति सभा हल र बुटवलको रामनगरमा रहेको धागो कारखानामा सवै मन्त्रालय राख्न सकिने अवस्थाका छन ।
बुटवल व्यापारिक शहर भएका हिसावले पनि यस क्षेत्रमा रोजगारी सम्भावना बढि छ । प्रदेशस्तरीय मोतिपुर औद्यौगिक क्षेत्र निमार्ण प्रक्रियामा छ । यहाँ उद्योग कलकारखानाहरु, व्यपार व्यवसाय पनि निकै फस्टाएकोले रोजगारीको प्रसस्त सम्भावना हुन सक्छ ।
पहाडी जिल्लाहरु पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँचीका अधिकांशहरु वासिन्दा बुटवलमा रोजगार छन । लुम्बिनी क्षेत्रमा पर्ने यो ठाउँले पर्यटकीय सम्भावनाका हिसावले पनि रोजगारको सिर्जना गर्नसक्छ ।
बुटवलमा प्रदेश स्तरको बहुमुखी क्याम्पस छ । अझ यसलाई स्तरउन्नती गर्न सकिन्छ । राष्ट्रलाई उत्कृष्ट नजिता दिन सक्ने सरकारी तथा निजी शैक्षिक संस्थाहरु यहाँ छन ।
निजी तर्फ उत्कृष्ट नजिता दिएका न्यू होराईजन, दीप बोडिङ, एभरेष्ट बोडिङ, प्यारामाउण्ट बोडिङ, अक्सफोर्ड बोर्डिङ, एपेक्स स्कुल, सैनामैना मेमोरियल बोडिङ लगाएका निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरु रहेका छन ।
बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको गुरुयोजना अहिले निर्माणको क्रममा छ । भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल बन्दै छ । ६ लेन सडकको ६० प्रतिशत काम भइसकेको छ । अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र प्रदर्शनी स्थल, बेलबास बेथरी पर्यटकिय सडकलगायत पूर्वाधारका कारण प्रदेशको राजधानी दाङ भन्दा बुटवल उपयुक्त हुन्छ ।
नेपालको मध्यभाग तथा भारतीय बजारबाट नजिक रहेका कारण रुपन्देही उद्योग स्थापनाको उपयुक्त स्थान बन्दै गएको छ । रुपन्देहीमा ठूला पूर्वाधार बन्न शुरु भए यता उद्योग खुल्ने क्रम बढेको छ ।
जिल्लामा तीन सय ५० भन्दा बढी ठूला उद्योग छन् । पछिल्लो समय यहाँ ठुला उद्योगहरुको चाप झन बढेको छ । बुटवल–भैरहवा सडकको पूर्व पश्चिम, लुम्बिनी कोरिडोर क्षेत्र उद्योगहरुले भरिएको छ । सिक्टहन, देवदह क्षेत्रमा ठूला उद्योग खुल्ने तयारीमा छन् । अहिलेसम्म सिमित वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुमा लगानी बढाइएको छ ।
साना उद्योगहरुको संख्या बढेको छ । जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका अनुसार जिल्लामा साढे ९ हजारबढी उद्योगहरु चालु अवस्थामै रहेका छन् । गएको वर्षमात्रै एक हजार ३६ वटा उद्योग दर्ता भएका थिए । यी ३ करोड लगानीभन्दा कमका हुन् ।
उर्जा, कृषि, वन पैदावार, खाद्यन्न, छाला, प्लाष्टिक, स्टिल, फलाम, सिमेन्ट लगायतका उद्योग खुलेका छन् । ठूलो लगानीका उद्योग मात्रै २ सय २१ वटा छन् । यी उद्योगमा अर्बाै लगानी छ ।
रुपन्देही जिल्लामा युनिर्भसल मेडिकल कलेज छ । त्यस संगै तिलोत्तमा नगरपालिकामा सरकारी स्तरको मेडिकल कलेजका लागि आवश्यक तयारी हुँदै छ । त्यस बाहेक १ सय बर्ष पुरानो लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल पनि यहि रहेको छ ।
अञ्चल अस्पताललाई पनि मेडिकल कलेजको रुपमा विकास गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका छन । त्यसैगरी सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल (आम्दा) पनि यसै क्षेत्रमा रहेको छ । त्यस संगै निजी क्षेत्रका ठुला अस्पतालहरु पनि यहाँ रहेका छन । बुटवल अस्पताल, तिलोत्तका अस्पताल, मेडिटेक अस्पताल, लुम्बिनी नर्सिङ, चौराह अस्पताल, लायन्स आँखा अस्पताल लगाएका अस्पतालहरु यस क्षेत्रमा छन ।
त्यसैगरी गैरनाफामुलक गौतम बुद्ध मुटु अस्पताल पनि यहि नै रहेको छ । हरेक उपचार हुन सक्ने प्रसस्त अस्पतालको विकास यस क्षेत्रमा छ । भैरहवामा भिम अस्पताल, रणअम्बिका आँखा अस्पताल, सिद्धार्थ अस्पताल पनि रहेको छ ।
रुपन्देहीको बुटवल सुरक्षाको हिसावले पनि अत्यान्तै सुरक्षित छ । प्रदेशको राजधानी भएको खण्डमा आवश्यक आपत्तकालिन अवस्थामा सुरक्षा परिचालन गर्न र सुरक्षाकर्मी बुटवलमा ल्याउनका लागि परासी, कपिलबस्तु, पाल्पा र अर्घाखाँचीबाट एक डेढ घण्टाको अवस्थामा सुरक्षाकर्मीलाई बुटवलमा ल्याउन सकिन्छ ।
त्यस बाहेक बुटवलमा प्रदेश नंं ५ स्तरिय नेपाल आर्मीको क्याम्प बनिसकेको छ । शसस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीको पनि यहाँ जस्तो अवस्थामा पनि परिचालन गर्न सकिन्छ । सिमा क्षेत्रसँग जोडिएको जिल्लाका कारण घटना विशेषमा सिमा सिल गरेर पनि आवश्यक काम गर्न सकिन्छ ।-janatasamachar